Aljeeriyaan qormaata manneen barnootaan ol aanoof interneetii cufatte - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Ijoollee mana barumsaa (2016)
Hanna qormaata mana barumsaa sadarkaa ol aanaa ittisuuf jecha Aljeeriyaan yeroo qormaanni kun gaggeeffamaa jirutti saatii lamaaf guutummaa biyyaatti interneetii cufte.
Tajaajilli interneetii, lamaanuu kan mobayiliifi toora dhaabbataan yeroo tokkoo tokkoon qormaataa kennamutti saatii tokkoof cufama. Tarkaanfiin kunis hanna qormaataa karaa interneetii waliif dabarsuu ittisuudhaaf jedhameera..
Inteneetiin addaan cituun kun turtii yeroo qormaataa kana keessa, Waxabajjii 20-25 kan itti fufu ta'a.
Tarkaanfiin kan akka fudhatamuuf barbaadameef hanna qormaataa bara 2016 keessaa babal'ateen booda yommuu ta'u osoo qormaanni hin jalqabamiin dura gaaffileen karaa interneetii namootaan waliif daddarbaa ture.
Sababa kanaatiif, bara darbe keessa aanga'oonni biyya sanaa dhaabbileen tajaajila dhiyeessan akka miidiyaalee hawwaasummaa akka addaan kutaniif gaafatanii turan. Tarkaanfiin fedha qofaarratti hundaa'u garuu ga'aa miti.
Ministirri Barnootaa Nooriyaa Bengahbiriit akka jettetti yeroo qormaanni gaggeeffamaa jiru kanatti 'facebook'n guutummaatti cufama.
Goodayyaa suuraa Ministira Barnootaa Nooriyaa Bengahbiit
Bengahbiriit akka ibsitutti murteen kun yoo kan nama hin gammachiifne ta'ellee yeroo qormaanni hannaan waliif darbu callisnee teenyee hin ilaallu.
Itti dabalataanis, meeshaaleen eleketirooniksii interneetiin waliin walitti dhufeenya qaban barattoonniifi barsiisonni guutummaa biyyaatti galma qormaanni guutummaa biyyaatti keessatti gaggeeffamu 2,000 akka hin seenne dhorkameera.
Bengahbiriitiin bakka qormaanni itti maxxanfamuttis kaameraan dhoksaan waraabuufi kan mobaayiliin akka hin hojjenne taasisu kaa'ameera jetti.
Torban dhufu keessa baratoonni 700,000 ol ta'an guutummmaa biyyaatti qormaata mana barumsaa sadarkaa ol aanaa kan fudhatan yommuu ta'u qabxii isaanii kan baran ammoo Adoolessa 22 ta'a jedhameera.